JW Library App: ဖတ်ရှုရာမှာ ထပ်ရွေးချယ်စရာများ (Android) | JW.ORG အကူအညီ
JW Library သုံးပြီး ဖတ်ရှု​လေ့လာတဲ့​အခါ ပို​အဆင်ပြေ​စေဖို့ အသွင်အပြင်​တချို့ကို ပြင်ဆင်​ပေးထား​ပါတယ်။ အခန်း​တစ်ခု၊ ဆောင်းပါး​တစ်ခုကို သင်​ဖတ်ရှု​နေတဲ့​အခါ မျက်နှာပြင်​ထိပ်မှာ​ရှိတဲ့ app bar မှာ ဒီ​လုပ်ဆောင်ချက်​တွေကို တွေ့​နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်​တချို့ကို ရနိုင်ဖို့ app bar မှာ​ရှိတဲ့ More ခလုတ်​ကို နှိပ်ပါ။
. . . မှာ ဖွင့်​မယ်
. . . မှာ ဖွင့်​မယ် (Open in . . .) အသွင်အပြင်​က JW Library မှာ ကြည့်နေ​တဲ့ အကြောင်းအရာကို တခြား apps မှာ​ကြည့်​နိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ စာရင်း​တွေ တွေ့​နိုင်အောင် . . . မှာ ဖွင့်​မယ် ခလုတ်​ကို နှိပ်ပါ။ ဥပမာ၊ အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်​မှာ ဖွင့်​မယ် ခလုတ်​ကို နှိပ်​မယ်​ဆိုရင် သင် အခု​ဖတ်နေ​တဲ့​စာမျက်နှာ​ကို ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်​မှာ ဖွင့်​ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာပြန်ကျမ်း​စာတွေကို စာရင်း​ထဲ​ထည့်​ချင်တယ်၊ ထုတ်​ချင်တယ်​ဆိုရင် Add ဒါမှမဟုတ် Remove ခလုတ်​ကို​နှိပ်ပါ။ ကျမ်းစာကို ဆွဲတင်၊ ဆွဲချ​ပြီး စာရင်းကို သင်လို​ချင်တဲ့ အစဉ်လိုက် စီ​နိုင်ပါတယ်။
JW Library မှာ နောက်ထပ်​ကျမ်းစာတွေ ထည့်​နိုင်ပုံကို သိချင်​တယ်​ဆိုရင် “ကျမ်းစာတွေ​ကို ကူးယူ၊ စီစဉ်​နိုင်ရာ​များ— Android” ကို​ကြည့်ပါ။
အဲဒီ​အသွင်အပြင်​တွေ​ပါတဲ့ JW Library 1.4 ကို ၂၀၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ​လမှာ တင်ထား​ပြီး​ဖြစ်ပါတယ်။ Android 2.3 နဲ့ အဲဒီ​နောက်ပိုင်း အသစ်​ထုတ်​တဲ့ ဖုန်း၊ တက်ဘလက်​တွေ​မှာ အသုံးပြု​နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ​အသွင်အပြင်တွေကို မရဘူး​ဆိုရင် “JW Library ကို စတင်​အသုံးပြုခြင်း—Android” ဆောင်းပါး​ထဲ​က “နောက်ဆုံးထုတ် အသွင်အပြင်​များ ရယူပါ” ခေါင်းစဉ်​ငယ်​အောက်မှာ​ပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ​အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ဖတ်ရှုရာ​မှာ ထပ်​ရွေးချယ်စရာ​များ—Android
Android App on Google Play (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်) Available at Amazon (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)